You are at:Home»Category: "ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ"
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးစိုးဝင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးမြသိန်း ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ်(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ဥက္ကဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခင်မောင်ထွေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမှတ်(၂) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးအောင်နိုင်တို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်…
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ (UBP)ပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊အမှတ်(၆)မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်မြတ်မွန်ခိုင်၊ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်နန်းရီရီသန့်၊တိုင်းဒေသကြီး(၂)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကိုကိုထွေးတို့ယနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ်။ Photo။Myiat Mon Khing #UBP #CHANGEforBETTERMENT #ပိုပြီးကောင်းအောင်ပြောင်းကြမယ် ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP)ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ၿပိဳင္မည့္…
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၏ အရာရာသည် ဥပဒေ အောက်တွင်သာ ရှိပါသည် ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဥပဒေပေါ်ပေါက် အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ကျနော် ရဲလင်းထက် လွှတ်တော်သို့သွားလိုပါသည်။ ဦးနှောက် ဖြင့်…
တောင်ပေါ်နာဂဒေသ လဟယ်တွင် အဝါရောင်လွှမ်းပြီနော်🌸 လဟယ်မြို့နယ် ၁၀.၉.၂၀၂၀ #UBP #ခြောက်ထောင့်ကြယ်နီ #ပိုပြီးကောင်းအောင်ပြောင်းကြမယ် #CHANGEforBETTERMENT ———————— ေတာင္ေပၚနာဂေဒသ လဟယ္တြင္ အဝါေရာင္လႊမ္းၿပီေနာ္🌸 လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀.၉.၂၀၂၀…
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ မုဒုံမြို့နယ် တောင်ပိုင်းရွာများသို့ အောင်နိုင်ရေးပိုစတာများစိုက်ထူခြင်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
မုဒုံမြို့ကရွှေဝါရောင်တွေ တောင်ပိုင်းကိုဆင်းပါပြီ… ယနေ့ (10.9.2020) နေ့မှာ မုဒုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ တောင်ပိုင်းရွာများသို့ အောင်နိုင်ရေးပိုစတာများစိုက်ထူခြင်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ .. ပထမဦးစွာနေ့လည်၁၁နာရီ၁၅မိနစ်ချိန်တွင်ဂုံညှင်းတန်းကျေးရွာ စျေးထိပ်၌ပါတီဥက္ကဋ္ဌနင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှအမွှေးနံ့သာရေများပက်ဖြန်၍ပါတီ အောင်မြင်ရေးကြွေးကြော်သံများဖြင့်အောင်မြင်စွာစိုက်ထူပေးခဲ့ပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်. .(UBP).ပါတီအောင်မြင်ရမည်. #UBP…
၈.၉.၂၀၂၀ရက်​နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး မုံရွာမြို့ ပြည်​ထောင်စု​ကောင်းကျိုး​ဆောင်ပါတီ ​အောင်နိုင်​ရေးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။